Shirkii uu iclaamiyey madaxweyne Deni,oo uu furmi doona 15 bishaan - Awdinle Online
Shirkii uu iclaamiyey madaxweyne Deni,oo uu furmi doona 15 bishaan
March 7, 2020 (Awdinle Online) –Wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Puntland ayaa faah faahin dheeri ah ka bixisay shirweynaha 15 bishaan ka furmi doono magaalada Garoowe ee gobolka Nugaal, kaas oo looga hadlayo aayaha maamulkaasi.
Wasiirka wasaaradaasi, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkaasi ay isugu imaan doonaan dhammaan saamileyda Puntland.
Sidoo kale wuxuu ka dalbaday shacabka deegaanada maamulkaasi in aysan wal-wal ka muujin shirka oo lagu miisaami doono doorka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya.
Dhabancad ayaa sidoo kale intaasi ku daray in shirweynahaani oo qaban qaabadiisa laga dareemayo Garoowe uu yahay mid waxtar u leh Puntland.
“Shirka ka dhacaya Garoowe 15-ka bishaan waa mid waxtar u leh Puntland, yaan laga hordhicin balse aynu sugno inta uu kasoo idlaanayo, waxaana dadka ugu baaqayaa in aysan ka walwalin.” ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha maamulka Puntland.
Dad badan ayaa walaac ka muujinaya qabsoomida shirkaan oo lagu soo aadiyey xilli xasaasi ah.
7,February ayay ahayd ka mid markii Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullahi Deni oo shir Ja’raaid ku qabtay magaalada Boosaaso ayaa ka hadlay khilaafka dowladda federalka iyo maamul goboleedyada.
Madaxweyne Deni ayaa sheegay in Puntland ay shir wada-tashi arrimaha dowlad dhiska Soomaaliya ah ku qabsan doonto magaalada Garoowe,
Saciid Deni ayaa ku eedeeyey dowladda dhexe ee Soomaaliya “inay faro-gelin xooggan ku hayso” arrimaha maamul goboleedyada.
Previous articleDawladda Soomaaliya oo cadaadis xoog leh kala kulmeysa Mareykanka
Next articlePuntland oo looga digay la shaqeynta Madaxda Ahlusunna